“Barcelona waxay ku jiri doontaa qalbigeyga… Messi-na waa kan ugu fiican” – Ivan Rakitic - Hargeele - Wararka Somali State
(Spain) 20 Nof 2020. Xiddiga khadka dhexe Naadiga Seville ee Ivan Rakitic ayaa muujiyay jaceylka iyo qadarinta uu wali u hayo kooxdiisii hore ee Barcelona.
Wargeyska “Sport” ee dalka Spain ayaa daacay wareysi uu bixiyay xiddiga reer Croatia ee Ivan Rakitic, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Barcelona, Kooxda, Magaalada, iyo dadka ku dhex nool, had iyo jeer qalbigeyga ayey ku jiri doonaan inta aan noolahay.”
Dhinaca kale Ivan Rakitic ayaa wuxuu ka hadlay saaxiibkiis hore ee Lionel Messi, wuxuuna yiri:
“Messi waa lambarka koowaad, anigoo ixtiraam buuxa u haaya dhamaan xiddigaha kale waa weeyn ee kubadda cagta.”
“Leo waligiis ma ogaan doono qiimaha ay leedahay in laga garab ciyaaro.”
Si kastaba ha ahaatee, Rakitic ayaa ka tagay Barcelona xagaagii la soo dhaafay kaddib markii uu 6 sano u ciyaarayay kooxda reer Catalonia, xiddiga reer Croatia ayaa guulo badan la gaaray Blaugrana, oo ay ku jiraan 4 jeer horyaalka La Liga ah, iyo 4 jeer oo Copa del Rey ah.
Sidoo kale wuxuu kula soo guuleystay kooxda Barcelona, koobabka Spanish Super Cup oo 3 jeer ah, iyo Club World Cup oo hal jeer ah, sidoo kale tartanka UEFA Champions League oo 2015-kii ahaa, iyo UEFA Super Cup.
Dhaqaatiir ka socota Soomaali iyo Turki oo Muqdisho ka bilaabay Kulamo caafimaad oo aqoon kororsi ah
Henderson oo ka hadlay dareenkiisa kaddib markii uu ku buuleystay abaal-marinta xiddigii ugu fiicnaa England 2019
Valverde oo ku dhawaaqay liiska xiddigaha Barcelona ee ka qeyb galaya kulanka Sevilla… (Yaa ka maqan yaase ku soo baxay?)